Folklore – Beekan Guluma Erena
Folklore YUUNIVARSITII OROMIYAA
Afaan Oromoo Y1S2
Meets: MWF 4:00 – 5:00PM
Instructor: Beekan Guluma Erena
Office: Hutchins Center, 104 Mt. Auburn
Kabajamaa barataa/ttuu, moojula kana yoo xinnaate si’a lamaaf isaa ol erga dubbisteen booda abbaltii kanaa gaditti siif kenname hojjedhu. Abbaltiin kun waa lamarratti jabaa ta’uukee kan mirkaneessudha. Inni tokkoffaan sirriitti moojula kana dubbistee xumuruukee kan agarsiisu yoo ta’u, inni lammataan ammoo barumsa kanaan alatti wanta haaraa hawaasa keessa jiru baruuf dhamaatee ati gootu ittiin mirkaneessuudha.Dabalataanis koorsiin kun siif galuu isaa yookiin ifaajee ati koorsii kana hubachuuf goote mara kan agarsiisanidha. Kanaaf gaaffilee kanneen hundaaf deebii haaluma gaafatamteen deebisi.
Abbaltiin/gaaffileen kunkutaalee lamatti kan qoodamu yammuu ta’u, gaaffilee kutaa jalqabaa dhimma kallattiin moojula kana keessaa deebi’u yommuu ta’u,inni lammataa immoo Piroojektii guddaa kan ati madda ragaakeetii hawaasa keessaa hojjettu sana gidduu galeessa godhachuun waa’ee nyaata aadaa, meeshaalee aadaafi waan hawaasaa mara walitti qabuun akka gaafatamtetti hojjettee dhuftudha. Dhumarratti hojjettee walitti qabdee..hiitee kan galchitudha. Akka walii galaatti hojii kana lamaan (inni jalqabaa %10 keessaa, inni lammataa ammoo %60)walii galatti 70% keessaa siif ilaalama. Yeroo deebitu %30 keessaa qoramta.
Abbaltii gatiin itti kennamu kana yeroo hojjettutti qabxiilee armaan gadii kana yaada keessa galchuun barbaachisaadha. Isaanis,
Deebiin ati kennitu hundi kallattii gaafatamte qofaan deebi’uu qaba.
Waan hingaafatamiin hindeebisiin.
Barreeffamni harkaakee qulqulluufi kan miidhagu ta’uu qaba. Yoo dandeessee Kompuuteraan barreessiiti ‘Soft Copy’ isaa fidi.-qabxii tolaa/bonus gonfachuullee dandeessa.
Dogoggorri qubee tokkollee keessatti argamnaan qabxiikeerratti miidhaa guddaa fida.
Deebiin walirraa garagalfame tokkumti qabamee/argamee jennaan koorsicha irra deebitee fudhatta malee isa itti aanutti hindabartu.Akka seera kaa’ameettis adabamuu malta.
Deebiin ati kutaa Iffaa kennitu yoo baay’ate fuula4qofaarratti kan xumuramu ta’uu qaba.kanas %10 keessaa itti madaalamta.
Deebii ati kutaa IIffaa ‘tiif kennitu garuu yoo xiqqaate fuula jaatama(70) gadi ta’uu hinqabu; (qulqullinni barreeffamaafi qindoominni yaadaakanarratti gatii guddaa qaba).
Abdisa B.(Facebook: Abdiisaa Bancaa Jaarraa). Email:abdisabnch39@gmail.com, Mob:+251911527293/0910130926.